Soosaarayaasha Farshaxanka Qurxinta | Shiinaha Qurxinta Alaab-qeybiyeyaal & Warshad
Tilmaamaha: 1. Fudud dhoobada wanaagsan 2. Cabirro badan, naqshado kala duwan 3. Tayo wanaagsan, qiimo tartan 4. MOQ: 50pcs hal naqshad 5. Waqtiga hogaaminta: 35days 6. OEM waa la aqbali karaa Taageerada Farshaxanka ayaa gacanta lagu sawiray dusha sare qalin jilicsan ka dibna gacanta lagu rinjiyeeyay ka dib ayaa lagu shiday heerkul aad u sarreeya si loo hubiyo tayada ugu sareysa oo ka sii jilicsan kana midab badan midabka. Wax soo saarkayagu waxay keenaan xarrago iyo qaab aan la qiyaasi karin oo loogu talagalay jawi nool iyo xafiis xafiis ...
Qurxinta dusha sare ee miiskeena ayaa ah mid gacmeed lagu sameeyay iyadoo la adeegsanayo habka dhoobada iyo shaqada naqshadeynta ee laga soo qaaday Shiinaha dhaqameedkeeda, dheryaha dhoobada dhalaalaya ayaa loo qaabeeyey shaqooyin farshaxan oo habeysan Waxay u keenaan xarrago iyo qaab aan la qiyaasi karin oo ah deegaanno lagu noolaado iyo xafiis xafiis si loo abuuro nolol aad u qurux badan. Alaabooyinka moodada, waxaad ka heli doontaa fikrado iyo dhiirrigelin kaa caawinaysa qurxinta iyo madaddaalada si qurux badan. Astaamaha 1. Gacanta lagu rinjiyeeyay, muraayadda dhalaalay iyo foornada lagu dhejiyay qurxinta dhoobada a ...
Tilmaamaha 1.Fine dhoobada dhoobada ah 2.Multi tirada, naqshadaha kala duwan 3. Qiimo macquul ah oo leh tayo sare leh 4.MOQ: 60pcs hal naqshad 5.Lead time: 20-35days Waxaan haynaa naqshado badan oo aad ku xulaneyso. Fadlan nala soo xiriir haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato dusiishayada. Foornooyinkayagu dhammaantood waa wax gacmo lagu sameeyey. Iibso shaashaddan loo qaabeeyey si fudud oo sudhan! Tani waxay u noqon laheyd hadiyadda ugu fiican qofkaas farshaxanka jecel, milkiilaha baarka, saaxiib, xubin qoyska ka tirsan, ama naftaada u ilaali! Muralkani wuxuu wax weyn ka tari lahaa baarka, makhaayada ...
Waxaan haynaa naqshado kala duwan oo aad ku xulaneyso. Waxaan sidoo kale ku sawiri karnaa naqshadahaaga dusha sare. Iyo adeegga OEM waa la heli karaa. Magnetka ka dambeeya ayaa lagu dhejin karaa dusha sare ee dusha sare iyo guddiga birlabta. Sida birta lagu rusheeyey albaabbada qaboojiyaha, khaanadaha birta, daboolida kala duwanaanta, foornooyinka, armaajooyinka fayl garaynta xafiiska, albaabada amniga, sabuurada magnetic, sabuurada magnetic, sabuurada sawirada carruurta magnet, iwm. lagu xayeysiiyaa g ...
Xeebaha gacmaheena lagu farsameeyo ayaa dhameystir u ah faafinta cunadaada. Dareemay si loo ilaaliyo miiska waxaana lagu sawiray gacmo ahaan waana ka dheeri badan yihiin kana midab badan yihiin habka. Xeebayaashayadu waxay noqon doonaan hadiyad qaas ah oo gaar ah oo loogu talagalay aqalgalinta guriga, dhalashada, iyo xaflado kale… ama kaliya lagu muujiyo sida aad u danaynayso kuwa aad jeceshahay! Waad u adeegsan kartaa iyaga oo ah shaah xeebeedka, arooska, qurxinta miiska… Iyaga ayaa loo qaabeyn doonaa adiga! Habka wax soo saarka Main All wor ...